बाबालाई भेट्न नपाउँदा ममी रुनुभयो
- युग्यता विश्वकर्मा
मेरो नाम युग्यता विश्वकर्मा हो । म श्री लक्ष्मी माविमा कक्षा ४ मा पढ्छु । हाम्रो स्कुल मोरङको केराबारी गाउँपालिका-९ मा छ । स्कुलको पढाइबाहेक पनि मलाई नयाँ-नयाँ कुराहरू पढ्न र जान्न एकदमै मनपर्छ । कोरोना भाइरस सर्ने डरले चैतदेखि स्कुल बन्द भएकाले धेरै दिन स्कुल जान नपाउँदा मैले त स्कुलमा पढेका कुराहरू पनि बिर्सिन लागेकीे थिएँ ।
स्कुल नलाग्दा म घरमा ममीबाबालाई काममा सघाउने, पढेर बस्ने, टीभी हेर्ने, गाउँका साथीहरूसँग खेल्ने, चित्रहरू बनाउने गरेर समय बिताउने गरेकी थिएँ । तर थाहा छ ! अहिले त हाम्रो स्कुल फेरि लाग्न थालेको छ नि !
स्कुल लाग्न थालेको झण्डै दुई हप्ताजति भयाे । स्कुल लागेपछि म एक दिन पनि नछुटाई जाने गरेकी छु । स्कुलबाट बिदा भएर घर आएपछि सबैभन्दा पहिला खाजा खाएर म होमवर्क गर्छु, त्यसपछि ममीबाबालाई सकेको काम सघाउँछु र खेल्छु । मलाई नआएको कुरा मेराे ममीले सिकाइदिनुहुन्छ ।
कोरोना भाइरस सर्ने डरले स्कुलमा हामी सबैले मास्क, फेससिल्ड र स्यानिटाइजर लगाएर आउँछौँ र सर/मिसहरूले पनि लगाउनुहुन्छ । यो वर्ष देशविदेश सबैतिर कोरोना भाइरसले गर्दा धेरै जनाको मृत्यु भइरहेको मैले टीभीमा हेरेर थाहा पाएँ । हाम्रो गाउँपालिकामा पनि धेरै जनालाई कोरोना लागेको मैले सुनेकी छु । कोरोनाले गर्दा धेरै जनाले दु:ख पाउनुभएको सधैँ साँझ टीभी समाचार देखिन्छ ।
हाम्रो बाबा पनि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । कोरोनाकै हल्लाका कारण उहाँ गत साउनमा बल्ल घर आइपुग्नुभयो । विदेशमा हुँदा उहाँले मलाई फोनमा मीठो खानेकुरा, खेलौना र नयाँ लुगा किनेर ल्याइदिने भन्नुभएको थियो । बाबा विदेशबाट त आइपुग्नुभयो । तर, मलाई फाेनमा भनेजस्तो केही पनि ल्याइदिनु भएन ।
बाबाले भन्नुभएको, कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा काम बन्द भएर त्यसै फर्किनुपरेपछि पैसा पनि नभएर मलाई केही नल्याइदिनुभएको रे ! धेरै दिनपछि विदेशबाट बाबा आउनुभएकाले मलाई बाबाको काखमा बसेर खेल्ने मन थियो । तर, त्यतिबेला बाबाले मलाई छेउमा नआऊ, मलाई नछोऊ भनेर छेउपर्न नै दिनु भएन । त्यसो गर्दा मलाई एकदमै नरमाइलाे लाग्यो र म रोएँ पनि । बाबालाई कोरोना भाइरस सरेको हुन सक्छ, त्यसैले हामीलाई पनि सर्छ भनेर छेउ पर्न नदिनुभएको भन्ने कुरा मैले पछि चाल पाएँ ।
विदेशबाट नेपाल आए पनि बाबा काठमाडौंमै १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको रहेछ । काठमाडौंबाट बाबा घर आउनुभए पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्ने भएकाले उहाँ हाम्रै घरकाे एउटा कोठामा छुट्टै बस्नुभयो । बाबा बल्लबल्ल आउनुभए पनि काेराेनाकै कारण उहाँलाई भेट्न नपाउँदा ममी रुनुभयो । मलाई पनि एकदमै नरमाइलो लाग्यो र निकै बेर रोएँ । सायद यो कुरा म कहिल्यै बिर्सन्नँ होला ।
बाबा केही दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेपछि कोरोना चेक गराउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो, अनि मात्र हामीले छुन र नजिकबाट भेट्न पाएका थियौँ । बाबाले मलाई काखमा राख्दै यस पटक कोरोनाका कारण काम बन्द भएर पैसा नभएपछि केही ल्याइदिन नपाएको कुरा बताउनुभयो ।
यस पटक परिवारका सबै जना घरमा भएकाले सबै चाडबाड एकदमै राम्रो र रमाइलो गरी मनायाैँ । यसपालिको दसैँमा हाम्रो सिंगो परिवार मामाघर गयौँ । मामाघर हाम्रो गाउँभन्दा अलिक पर छ । मामाघरमा पिङ लगाएको रहेछ । त्यो पिङमा पालैपालो खेल्यौँ । बाटोमा पनि लिङ्गे पिङ लगाएको देखियो । यसपालिको तिहार पनि एकदमै रमाइलो भयो ।
कोरोना भाइरस सर्ने डरले हामी यतिबेला कतै हिँड्नुपर्दा पनि फेससिल्ड, मास्क र स्यानिटाइजर प्रयाेग गर्छौँ । चाडबाड सकिएपछि स्कुल त लाग्न थालेको छ तर फेरि कोरोनाले बन्द हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । धेरै दिन स्कुल जान नपाउँदा पढेको कुरा बिर्सिन सकिने भएकाले स्कुल बन्द नहोस् जस्तो लाग्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २७, २०७७, ०७:३७:००